एजेन्सी, ११ बैशाख । प्रेम, विवाह, बिछोड, सम्बन्ध बिच्छेद मात्रै नभएर जेल नेल समेत भोगेका बलिउड अभिनेता संजय दत्तको जीवन वास्तवमै उतारचढावले भरिएको छ । संजयको जीवनमा कति प्रेमिका आए त्यसको लेखाजोखा नै छैन । विवाहमा समेत ‘ह्याट्रिक’ गर्न भ्याएका भन्दै उनको मजाक समेत उडाउने गरिन्छ ।
ऋचा शर्मा, रिया पिल्लई र मान्यता दत्तसँग संजयले विवाह गरेका हुन् । हाल उनी मान्यतासंग सुखद दाम्पत्य सम्बन्धमा छन् ।
तर मान्यता भन्दा अगाडीकी श्रीमती रियासँगको सम्बन्ध भने केहि खास हुन सकेन । पहिलो श्रीमती ऋचाको मृत्यु भएपछि संजयले सन् १९९८ मा रिया पिल्लईसँग विवाह गरेका थिए । संजयले रिया पिल्लईसँगको सम्बन्ध पनि टिकाउन सकेनन् । जसको कारण सन् २००५ मा यी दुईको सम्बन्ध विच्छेद भयो ।
संजय दत्तको पहिलो श्रीमती ऋचा शर्माको क्यान्सरको कारण मृत्यु भएको त धेरैलाई थाहा नै होला । सँगै चलचित्रहरुमा काम गरिसकेका यी दुईको प्रेम सन् १९८७मा विवाहमा परिणत भएको थियो । तर ब्रेन ट्यूमरले ऋचाले सन् १९९६ डिसेम्बर १०मा मृत्युवरण गरेकी थिइन् ।
संजय दत्त र ऋचाबाट एक छोरी जन्मिएकी थिइन्, जसको नाम हो त्रिशला । ऋचाको मृत्यु हुँदा त्रिशला मात्रै ८ वर्ष की थिइन् । त्रिशाला अहिले ३१ वर्ष पुगीसकिन् । त्रिशाला हाल अमेरिकामा रहँदै आएकी छिन् । अभिनयमा खासै रुची नराख्ने उनी सामाजिक संजालमा भने सक्रिय छिन् ।
त्रिशालाले केहि समय अगाडी मात्रै आमा ऋचाले मृत्युवरण गर्नु भन्दा अगाडी लेखेको एक पत्र सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । त्यस पत्र ऋचाले आफ्नो अन्तिम दिनहरुमा छोरी त्रिशालाको नाममा लेखेकी थिइन् । जुन पत्र अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ ।
यस्तो थियो ऋचाको पत्र –
“यहाँ सबै आफ्नो-आफ्नो कर्म गर्न आउँछन् र कर्म पूरा गरि जान्छन्। सबैले जस्तै मैले पनि जीवनको बाटो आफै रोजेको थिएँ। तर म एक अँध्यारो मोडमा उभिरहेको छु। मलाई थाहा छैन कि म दोस्रो मौका पाउँछु की पाउँदिन, यो त समयले नै बताउनेछ। लामो समय नै कुर्नु पर्नेपनि मलाई मेरो अन्त्य निश्चित भैसक्यो। स्वर्गदूतहरू मलाइ लिन आउने पक्का भैसक्यो। मलाई अहिले देखि नै थाहा छ की स्वर्गदूतहरू आउनेछन् र मलाई त्यहाँ लैजानेछन्, जहाँ सपनाहरु मेरो प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।”
Prevनयाँ काम सुरु गर्नु पहिले यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! अवश्य सफलता मिल्नेछ !
Nextपाहुना भएर आएकी किशोरीलाई एक्लै भएको मौका छोपी आफ्नै घरमा बलात्कार गर्ने १८ वर्षिय युवक प्रहरी नियन्त्रणमा